Waa ayo Komi Shoukou - Komi Ma Xiriirin karo - Muuqaalka Cradle
Komi Shouko - Komi ma xidhiidhi karo
Leave a Comment Waa Kuma Komi Shoukou - Komi Ma Xiriirin karo
Komi Shouko waa dabeecadda ugu weyn ee caanka ah Anime Komi ma xidhiidhi karo. Laakiin waxaa jira wax la yaab leh oo iyada ku saabsan. Ma hadli karto. Xataa hal eray ma odhan karto. Hadaba waa kuma Komi Shouko? Iyo doorka ay ka ciyaareyso Anime-ka. Maqaalkan waxaan ku dul qaadan doonaa dabeecadeeda iyo doorka ay ku leedahay Naadi.
Hoos ka dhagayso codka qoraalkan:
Muuqashada qaybta 1
Qeybtii ugu horeysay ee Komi Ma xiriiri karto Waxa ay sheegtay in qofka welwelka ba'an qaba ay mararka qaarkood ku adkaan karto in uu la hadlo dad cusub. Komi waxay maalinteedii ugu horeysay ee dugsiga ku bilawday garaac. Qof kastaa wuxuu halkaas ku leeyahay indho Komi oo aad bay u fududahay in la arko sababta. Si yaab leh ayay u qurux badan tahay, xarrago leh oo caqli badan. Sidoo kale tani waxay sidoo kale soo bandhigtay aura dabeecad gaar ah oo qabow.
Komi Shouko ee Manga
In ka Naadi, Komi waxay u egtahay mid la mid ah sida ay ku sameyso gudaha Manga. Runtii aad ayaan uga helaa qaabka ay u eg tahay Manga daacadnimo. Sawirku waa mid aad u faahfaahsan oo si cajiib leh loo sawiray. Daawashada dabeecadda waxaa loo bixiyaa nolol si hal abuur leh oo dhiirigelin leh, dabcan waxaan arki karnaa halka fikradda loogu talagalay Naadi ka yimid.
Komi ma sheegi karo muuqaalka Manga
Dhab ahaan ma odhan karno haddii ay Komi ma xidhiidhin karo Manga iyo Komi ma xidhiidhin karo Anime gabi ahaanba waa isku mid. Adiga ayaa go'aamin kara naftaada adiga oo aragta maqaalkeena cusub ee ku saabsan halka aad ka akhrinayso Komi ma xidhiidhin karo Manga. Waa nasiib darro Komi sababtoo ah mar kasta oo ay eegto qof su'aal ah ama ay dareento, waxay siisaa indho aan la hubin oo cabsi leh.
Komi iyo Tadano
Daawadeeda waxay ku dhacdaa waqtiyo badan gudaha Anime-ka waxayna had iyo jeer ku dhammaataa si la mid ah: iyadoo kuwa kale ay aad u baqayaan ama ay raali gelin ka bixinayaan daacadnimada ugu sareysa. Waa dhibaato caadi ah Shouko laakiin nasiib wanaag, way la kulantaa Tadano Hitohito, arday saaxiibtinimo ku jirta fasalkeeda oo marka hore u soo dhawaada. Waxay siisay mid ka mid ah dhaldhalaalka iyada laakiin halkii uu ka carari lahaa ayuu isku dayay inuu la hadlo Komi oo fahan iyada. Tani waxay keenaysaa goobta sabuuradda.
Komi iyo Tadano oo ku yaal sabuuradaha
Tadano waxay u soo bandhigtay inay saaxiibkeed noqoto markay u sheegto xaaladiisa iyo inay doonayso inay samayso Saaxiibada 100. Komi aad ayuu ugu faraxsan yahay taas Tadano wuxuu bixiyaa tan oo si farxad leh ugu mahadcelinaya. Taasi waxay ku tusinaysaa Komi waa dabeecad wanaagsan oo naxariis badan oo qadarisa dadka isku daya inay caawiyaan iyada.
Halkii ay u dhaqmi lahayd qaab naxdin leh sidaad ka filayso inay samayso, waxay ku sii jirtaa daacadnimada qofka ay tahay waxayna ula dhaqantaa qof kasta si siman. Tan waxa lagu muujiyay sida ugu badan ee qaybta 5, halkaas oo Shouko waa in uu diidaa inanta daba-galka iyo hagardaamaynta ku haysa.
Is dhexgalka koowaad ee Komi
Komi's muuqaalka ugu horreeya ee Naadi waa marka qof walba uu u bogi doono marka ay iskuulka aadeyso. Is dhexgalka ugu horeeya si kastaba ha ahaatee wuxuu yimaadaa marka ay bilowdo in ay la xiriirto Tadano adigoo isticmaalaya sabuuradaha. Sidan ayay awood ugu yeelanayaan inay si xor ah isula hadlaan oo dabcan isbartaan.
Komi Shouko waxa uu isticmaalaa sabuurad si uu ula xidhiidho
Komi wuxuu adeegsadaa xabbad tamaashiir ah si uu ula hadlo Tadano oo waxay ku samaysaa qaab. Runtii qaybta hore marka ay macalinka weydiiso in ay is baro. Way kacdaa oo hal kelmad oo u eg mid daa'im ah ma odhanayso, dabadeed si lama filaan ah ayay u dul martay looxa oo si deg-deg ah oo yaab leh ayay magaceeda ugu qortaa qaabka cajiibka ah ee looxa.
Tani waxay saameyn weyn ku leedahay fasalka qof walbana wuu yaabay. Laga soo bilaabo halkan qof kastaa wuxuu u muuqdaa inuu caabudo oo jecel yahay Komi shuruud la'aan. Taasna waxaynu mar kale aragnaa iyada oo ay ku xeeran tahay qof la yidhaahdo Ren YamaiKaas oo aan u arkay mid aad u fool xun oo aan loo adkaysan karin.
Waxaan mar kale arki doonnaa Komi, adigana sidoo kale
Komi Can't Communicate waa Anime-ka caanka ah kaas oo wali soo baxaya oo qaybaha ay soo baxayaan todobaad walba. Hadda waxay ku jireen toddobaadka 3 ee Anime-ka, iyadoo qaybta xigta ay imanayso toddobaadkan. Taas aawadeed, Komi Ma xiriiri karto waxay noqon doontaa anime aan ka hadli doono bilaha soo socda ee soo socda. Waad ku mahadsan tahay akhrinta, waxaan kugu arki doonaa soo dirida xigta. Waxaad la socon kartaa wixii ku soo kordha blog-keena adiga oo iska diiwaan gelinaya liiska iimaylka ee hoose.
Iibso badeecada Cradle View oo taageer qorayaasha goobta
Tags: pageboy komi anime komi ma xidhiidhin karo anime manga komi ma xidhiidhin karo manga komi ma wada xiriiri karaan komi netflix netflix komi anime cusub
Gelitaan Hore Muuqaalada Sexy Cosplay ugu Wanaagsan
Gelitaanka Xiga Lamaanihii Anime ee ku habboon Kuzu No Honkai